ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ၏ ပူးပေါင်းရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဇန်နဝါရီလတွင် အဖြေပေး ထုတ်ပြန်မည်ဟု ရ? - Yangon Media Group
ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ၏ ပူးပေါင်းရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဇန်နဝါရီလတွင် အဖြေပေး ထုတ်ပြန်မည်ဟု ရ?
ရခိုင်ပါတီနှစ်ခုပူးပေါင်းရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးထပ်မံပြုလုပ်ပြီး ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ပြန်မည်ဟု ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD)အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုး ကျော်က ပြောသည်။ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီက ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထံ ပါတီပူး ပေါင်းရန် ကမ်းလှမ်းထားပြီး ယင်း သို့ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေ၊ မည်သို့ တုံ့ပြန်မည်ကို ဦးမျိုးကျော်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်က ပြောသည်။
”ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီကိုလည်း အလေးအနက်ထားပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းထားမှုကိုတော့ မကြာမီပြန်ကြားပေးမှာပါ။ သတင်းလည်း ထုတ်ပြန်မှာပါ။ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးကို ထပ်မံပြုလုပ်ပြီး ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ကမ်းလှမ်းချက်ကို အကြောင်းပြန်ပါမယ်”ဟု ဦးမျိုးကျော်က ပြောသည်။ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ၏ ပူး ပေါင်းရေးကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များအနေဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်၊ ၂၄ ရက်တို့တွင် အကြိုဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီသည် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ပါတီပူး ပေါင်းရန် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်သို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်တူ၊ မူဝါဒတူသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် မဟာမိတ်အဖြစ်သော်လည်း ကောင်း၊တစ်ပါတီအဖြစ်သော် လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ရခိုင်ပြည်သူလူထု၏ အနာဂတ်အကျိုးစီးပွားကို ပိုမိုလုပ် ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ နှစ်ပါတီကို တစ်ပါတီတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းလိုကြောင်း၊ တရားဝင် အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီဖြစ်ကာ ယင်းအချိန်က ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်အများစု အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ၂ဝ၁ဝ ရွေး ကောက်ပွဲကို ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ခဲ့သည့် ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်ကာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ဦးအေးသာအောင် ဦးဆောင်သော ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဒေါက်တာ အေးမောင် ဦးဆောင်သော ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီတို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့ကြ ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းသို့ရပ်တည်ခဲ့ရာမှ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတွင်း အခြေအနေများကြောင့် ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များက ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို တရားဝင်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီသည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ပါတီတည် ထောင်ခွင့် စတင်လျှောက်ထားခဲ့ သောပါတီဖြစ်ကာ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပါတီမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုထားခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်က အစွန်းရောက် သူပုန် ၁ဝ ဦးကို သုတ်သင်
ယာဉ်တိုက်မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်း ကွမ်းခြံကွေ့အနီး၌ တည်ထားခဲ့?
ကျူးကျော် တစ်သျှူး ငှက်ပျောဧက ခြောက်ထောင်ကျော် ဖျက်သိမ်းခြင်း မရှိပါက ၂ဝ၁၈ခုနှစ် သစ်တောဥပ?
ပညာမတတ်သည့်နိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရန် လွန်စွာခက်ခဲဟု ရန်??
ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေသော်လည်း ဗလင်စီယာကို ပွဲထုတ်မည် မဟုတ်ဘဲ ဒါလော့ကို ပွဲထုတ်ရန် မန်ယူနည်??